Maraynkan : 17 gobol oo laga Helay Cudurka Coronavirus – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Maraynkan : 17 gobol oo laga Helay Cudurka Coronavirus
Maraynkan : 17 gobol oo laga Helay Cudurka Coronavirus
Cudurka Coronavirus ayaa kusii faafaya Mareykanka, iyada oo Khamiistii laga helay afar gobol oo hor leh iyo magaalada San Francisco.
Tirada dhimashada ayaa sidoo kale gaartay 12 qof, iyada oo qofkii ugu dambeeyey uu ku dhintay deegaanka King County ee gobolka Washington, halkaasi oo lix qof ay horey ugu dhinteen.
Gobollada Texas iyo Maryland ayaa mid walba wuxuu xaqiijiyey saddex kiis oo la xidhiidha cudurka Coronavirus, halka Tennessee iyo Colorado laga helay hal kiis midkiiba.
20 kiis oo cusub oo cudurka ah ayaa laga helay degaanka King County, oo ay ka tirtsan tahay magaalada Seattle, taasi oo tirada guud ee halkaas gaadhsiisay 51 qof, halka dhimashaduna ay mareyso 11 qof.
In ka badan 3,200 oo qof ayaa cudurkan ugu dhintay caalamka oo dhan
itoobiya oo Tiradii ugu badneyd laga helay COVID19 maalin kaliya
Wefti Ka Socda Dawlad Degaanka Soomaalida Itoobiya Oo Socdaal Ku Yimid...